Ozi ọma | HNAC Technology Co., Ltd meriri nhọpụta maka Guangdong Yuehai Wulan Nuclear Water Plant Project-News-HNAC Technology Co., Ltd.
Ozi ọma | HNAC Technology Co., Ltd meriri ikere maka Guangdong Yuehai Wulan Nuclear Water Plant Project
Oge: 2021-08-27 Hits: 49
N'oge na-adịbeghị anya, HNAC Technology Co., Ltd. meriri nhọpụta nke atọ nke ọrụ ị nweta akụrụngwa nke Guangdong Yuehai Water Affairs na 2021, ngalaba ntinye ultrafiltration nke submerged nke Lam Nuclear Water Plant. Ọrụ a bụ nke Lanhe Water Plant na ọrụ mgbasawanye nke netwọk ọkpọkọ na-akwado na Nansha District, Guangzhou City, nwere ikike nhazi nke 150,000 m³/d. Ọ na-egbo mkpa mmiri na-eto eto nke Nansha New District dum. Ọ bụ isi ọrụ nkwado ọha na eze na ọrụ bara uru na mpaghara Nansha, Guangzhou.
Ihe oru ngo a ga-eji ọdọ mmiri ndị agbakọtara na ultrafiltration membrane dị elu teknụzụ ọgwụgwọ dị elu, nke ọ bụghị nanị na-eme ka mmiri dị mma nke mmiri mmepụta ihe kamakwa na-echekwa ala. N'otu oge ahụ, oru ngo na-ewebata echiche nke "smart mmiri ihe", na-adabere na elu kọmputa netwọk technology, GIS technology, BIM technology, na nnukwu-ọnụ ọgụgụ nchekwa data management technology iji wuo a centralized management na decentralized akara usoro Ọdịdị iji wuo. usoro bara uru, nchekwa, ntụkwasị obi, na nke zuru oke maka ndị ahịa, Sistemụ ihe ọmụma gbasara mmiri mmiri mepere emepe nke ọma, na-emeziwanye njikwa njikwa na ọnụ ahịa ahịa nke ndị ahịa.
Mgbasawanye oru ngo nke Lam Nuclear Water Plant bụ ihe ọzọ a na-ahụ anya na ngalaba ọgwụgwọ mmiri nke ime obodo site na usoro akpụkpọ anụ HNAC Technology, na-egosi mmepe azụmahịa nke ọgwụgwọ mmiri nke obodo na ọkwa ọhụrụ. Dị ka ụlọ ọrụ na-eduga n'ọhịa ọgwụgwọ mmiri nke ime obodo, HNAC ga-arụkọ ọrụ na ndị enyemaka ya Beijing Grant na Kanpur iji mee ihe niile iji rụchaa ọrụ ihe owuwu n'oge n'ịdị mma na oke.
Site na mmepe ngwa ngwa nke Nansha New Area, mmiri dị ugbu a ejirila nwayọọ nwayọọ na-egbo mkpa mmiri na-arịwanye elu. Dị ka otu n'ime isi mmiri na-enye mmiri na Nansha New Area, Lam Nuclear Water Plant e wuru maka ihe dị ka afọ 30, Ụlọ ọrụ na-eme ka mmiri dị ọcha na-eme ochie, usoro nchịkwa akpaaka ezughị ezu, na mmiri na-asọ oyi adịghị agbanwe agbanwe. Ọ dị mkpa iji mee ka ọrụ mgbasawanye nke Lam Nuclear Water Plant na-arụ ọrụ ngwa ngwa, na ịrụ ọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'otu oge. Mgbe arụchara ọrụ ahụ, a ga-abawanye ikike mmepụta mmiri kwa ụbọchị nke Lanhe Nuclear Water Plant site na tọn 30,000 ruo tọn 150,000, na-erite uru 300,000 ndị mmadụ na obodo atọ dị na Dongchong, Dagang na Lanhe dị n'ebe ugwu.
Nke mbụ: HNAC sonyere na ngosi nke abụọ nke akụ na ụba na azụmahịa nke China na Africa
Ọzọ: Onye isi ala Central African Republic gara emume mmecha nke ọdụ ụgbọ mmiri Boali 2